रातभरीमा ६ जनाको मृत्यु – sunpani.com
रातभरीमा ६ जनाको मृत्यु
सुनपानी । १६ बैशाख २०७८, बिहीबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – बाँकेमा रातभरीमा ६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
गएराती ८.५५ बजेदेखि विहान ५.३० बजेसम्ममा भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज र कोहलपुर मेडिकल कलेजमा ६ जनाको मृत्यु भएको हो । मृतकहरु नेपालगञ्ज, कोहलपुर र बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिकाका रहेका छन् ।
जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, बाँकेका फोकलपर्सन तेजबहादुर वलीका अनुसार, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ का ५८ वर्षीया महिलाको गएराती ८.५५ बजे मृत्यु भएको छ । बैशाख १२ गते पीसीआर जाँच गरेकी महिलाको भोलीपल्ट पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो । बैशाख १५ गते मेडिकल कलेज कोहलपुरमा भर्ना भएकी थिइन् ।
भेरी अस्पताल र नेपालगञ्ज मेडिकलमा राती ९ बजे एक÷एक जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ का ६० वर्षीय पुरुषको बैशाख ६ गते पीसीआर गरिएको थियो । उनी १५ गते भेरीमा भर्ना भए । राती ९ बजे उनको मृत्यु भयो । कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ११ का ४३ वर्षीया महिलाको बैशाख १५ गते पीसीआर जाँच गरिएको थियो । उनी त्यही दिन नै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा भर्ना भइन् । उनको राती ९ बजे मृत्यु भयो ।
भेरी अस्पतालमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ का ४२ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । बैशाख १० गते बागेश्वरी ल्याबमा पीसीआर गरेका उनी ११ गते भेरीमा भर्ना भएका थिए । उनको राती १० बजे मृत्यु भयो ।
भेरी अस्पतालमै बर्दिया जिल्ला बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं. ८ का ३२ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । बैशाख ९ गते भेरीमा पीसीआर जाँच गरेका उनी १५ गते भर्ना भएका थिए । उनको राती १.३० बजे मृत्यु भएको छ ।
नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ का ५५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । बैशाख १० गते मेडिकल कलेजमा पीसीआर जाँच गरेका उनी १५ गते भर्ना भएका थिए । उनको विहान ५.३० बजे मृत्यु भएको छ ।
योसँगै बाँकेमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक सय ६ पुगेको छ । बाहिरी जिल्लाबाट बाँकेमा उपचार गराउन आउदा मृत्यु हुने एक सय ९ जना पुगेका छन् ।